Iyo nyowani iPhone 7 ichaita kuti isu tisarudze yekumba bhatani Dzvanya | IPhone nhau
Iyo nyowani iPhone 7 ichaita kuti isu tisarudze pamba bhatani Dzvanya
Zuva rasvika, uye handizove ndiri ndoga kutaura kudaro ... Iwe unogona ikozvino kuwana itsva iPhone 7Hongu, kuiwana nhasi haizove iri basa riri nyore, kune vazhinji vakaedza kuchengetedza chishandiso chazvino kubva kuvakomana vari pachivharo uye chakatoneta munzvimbo zhinji dzekutengesa. Usaora moyo, mumazuva mashoma anotevera stock ichakura, uye iwe unogona kutomboedza kuwana iyo nyowani iPhone 7 kubva kune vane mvumo vagoveri, kunyange iwe uchifanira kuziva kuti kana iwe usingaitenge iyo zvakananga kubva kuApple, gore rechipiri yewarandi ichafanira kuvhara iyo.kuenda nayo kunzvimbo yawakatenga iko.
Iyo iPhone 7 iyo, pakati pezvimwe zvinhu, inotiunzira bhatani nyowani reKumba, iro bhatani iro rakakuvara kune vakawanda nekuti pakupedzisira iri bhatani ratinonyanya kushandisa muhupenyu hwedu hwezuva nezuva. Bhatani repamba rinochinja, pakati pezvimwe zvinhu, bvumira kuomarara kweiyo nyowani iPhone 7 uye iPhone 7 Plus. Zvinochinja sei? bhatani reKusha harichisiri bhatani rakajairwa, ikozvino inzvimbo ine 3D Kubata kugona uye kupindura kwemhepo (iko kudengenyeka kweTaptic Injini), chitsva icho Zvichaita kuti isu tisarudze mhinduro yeChete iyi kana tichigadzirisa yedu iPhone 7.
Sezvauri kuona mune yakapfuura ongororo, kana uchigadzirisa iyo nyowani iPhone 7 isu tinobvunzwa kumisikidza nyowani, ikozvino tinogona kusarudza mhando ye Dzvanya mhinduro yatinoda kuve nayo. Sezvaunoziva, ichi chinhu chinoitika mumaMacs matsva, bhatani rinonyangarika uye rinotsiviwa nekunyepera kwenhema ne vibration inogadzirwa neiyo Taptic Injini.
Uye isu tichava nazvo 3 nhanho dzekudzvanya, sezvo isu tichida zvimwe kana zvishoma. Asi isu chatinonyatsoda kuedza iyi mhando yemhinduro ona kana isu tikasarasa iro bhatani bhatani kunzwa isu tanga tasvika parizvino. Nyatsoteerera kuti munguva pfupi iri kutevera tichagovana zvese zvinoonekwa zvinogadzirwa neiyo nyowani iPhone 7 uye iPhone 7 Plus.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Iyo nyowani iPhone 7 ichaita kuti isu tisarudze pamba bhatani Dzvanya
Super Phantom Cat ndiyo yemahara app yevhiki